COP26: Te ho anisan'ny vahaolana amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro mampidi-doza ny indostrian'ny fizahantany
Home » Lahatsoratra farany farany » News sustainability » COP26: Te ho anisan'ny vahaolana amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro mampidi-doza ny indostrian'ny fizahantany
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao Mafana Jamaika • Kenya Breaking News • Vaovao • People • Vaovao Mafana Arabia Saodita • News sustainability • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK
Novambra 3, 2021
Fifanakalozan-kevitra momba ny fizahantany ho vahaolana amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro
Ekipa mpandresy momba ny fiovan'ny toetr'andro niforona androany: Arabia Saodita, Kenya, Jamaika no miara-miasa ary manasa ny hafa amin'ny COP26, ny fihaonamben'ny Firenena Mikambana momba ny fiovan'ny toetrandro.
Ny fizahantany no tao anatin’ny fandaharam-potoanan’ny ONU faha-26 androany Climate Change Conference (COP26) in Glasgow, UK
Nitety ny World Travel Market London nankany Glasgow handray anjara amin'ny COP26 ny Hon. Minisitry ny Fizahantany ho an'i Jamaika, Edmund Bartlett, ny Sekreteran'ny Fizahantany ho an'i Kenya Najib Balala, ary ny Minisitry ny Fizahantany ao Arabia Saodita Ahmed Aqeel AlKhateeb
Ny Minisitry ny Saodiana dia nametraka ny feo ho an'ny fizahan-tany hanambatra hery amin'ny fiovan'ny toetr'andro tamin'ny lahateniny.
Ireo mpitarika fizahan-tany telo avy any Kenya, Jamaika ary Arabia Saodita dia nametraka ny feo ho an'ny tontolon'ny fizahantany sy fizahan-tany manerantany amin'ny COP26 any Glasgow.
Ny fiaraha-miombon'antoka mba hahatonga ny fizahantany ho isan'ny vahaolana no dinika notarihin'ny filoha teo aloha Meksika Felipe Calderon.
Teo amin'ny tontonana ihany koa i Rogier van den Berg, Talen'ny Global Resources Institute; Rose Mwebara, Talen'ny Foiben'ny Teknolojian'ny Toetr'andro & Tambajotra, UNEP; Virginia Messina, SVP Advocacy, World Travel & Tourism Council (WTTC); Jeremy Oppenheim, mpanorina & mpiara-miasa zokiolona, ​​Systemic, Nicolas Svenningen, mpitantana ny hetsika momba ny toetr'andro eran-tany, UNFCCC
HE Ahmed Aqeel Al Khateeb hoy izy tamin'ny lahateniny:
Vahiny manan-kaja, Tompokolahy sy Tompokovavy.
Misaotra anao nandray anjara taminay teto androany hanohana ny Foibe Maneran-tany momba ny fizahantany maharitra.
Ny fiovaovan'ny toetr'andro no olana maika indrindra atrehin'ny olombelona, ​​ka izany no mahatonga antsika eto Glasgow.
Taorian'ny roa taona sarotra ho an'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany dia miverina ny dia.
Ary na dia vaovao tsara ho an'ny orinasam-pizahantany na aiza na aiza izany, dia mila miantoka isika fa ny fitomboana ho avy dia mifandanja amin'ny planetantsika.
Ny fikarohana navoakan'ny Nature tamin'ny taona 2018 dia nahatsikaritra fa ny fizahan-tany dia mandray anjara amin'ny 8% amin'ny famoahana entona mandatsa-dranomaso manerantany.
Mazava tsara ny tatitry ny IPCC 2021.
Mila mandray andraikitra maika sy mahery isika rehetra, ankehitriny, mba hamerana ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetr'andro.
Inona àry no azo atao?
Ny Fifanarahana Paris dia manantitrantitra fa ilaina ny mitady vahaolana amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro izay mifandanja amin'ny filàna fitomboana ara-toekarena sy fampandrosoana ara-tsosialy.
Tsy isalasalana fa indostria tena ilaina amin'ny toekarena manerantany ny fizahantany.
Maherin'ny 330 tapitrisa ny olona miantehitra amin'izany amin'ny fivelomany.
Alohan'ny areti-mifindra, ny iray amin'ny asa vaovao efatra noforonina na aiza na aiza eto amin'ny planeta dia eo amin'ny fizahan-tany.
Ny indostrian'ny fizahantany, tsy lazaina intsony, dia maniry ny ho anisan'ny vahaolana amin'ny fiovan'ny toetr'andro mampidi-doza.
Saingy, hatramin'izao, ny maha-ampahany amin'ny vahaolana dia mora kokoa noho ny natao.
Izany dia satria ny indostrian'ny fizahan-tany dia mizarazara lalina, sarotra ary maro karazana.
Manapaka sehatra maro hafa izany.
Orinasa fizahan-tany maherin'ny 40 tapitrisa - na 80 isan-jaton'ny indostria manontolo - dia kely na antonony.
Izy ireo dia mpiasan'ny dia, trano fisakafoanana, na hotely kely.
Tsy manana ny rendrarendran'ny sampana maharitra natokana ho azy izy ireo
na tetibola ho an'ny fikarohana sy fampandrosoana mifandraika amin'izany.
Latsa-danja kokoa ny fahafahan'izy ireo miditra amin'ny ekipan'ny mpanoro hevitra momba ny fitantanana karama be izay afaka manoro azy ireo amin'ny fomba mety hanapahany ny dian'ny karbônina nefa mitazona ny tampony.
Vokatr'izany, hatramin'izao, ny indostria dia tsy mbola afaka nandray anjara feno tamin'ny famahana ny olan'ny fiovaovan'ny toetr'andro, na dia eo aza ny fikasana tsara.
Ankehitriny, farany, mety hiova izany.
Ny Printsy Saodiana Saodiana, HRH Mohammed bin Salman dia nanambara ny famoronana ao anatin'ny fanjakan'ny Foibe Maneran-tany fizahan-tany maharitra.
Hivondronan’ny Foibe ny fiaraha-miombon’antoka amin’ny firenena maro samihafa.
Hanolotra torolalana sy fahaiza-manao tsara indrindra ho an'ny sehatra izy io, mba hanovana ny fomba fiasa iombonana amin'ny fiatrehana ny faharetana.
Mampientam-po ny STGC satria ho toeram-pivorian’ny olona avy amin’ny sehatry ny fizahantany, ny governemanta, ny akademia ary ny fikambanana iraisam-pirenena.
Foibe ahafahantsika mianatra avy amin'ny saina tsara indrindra momba ny faharetana sy mizara fahalalana mifandraika amin'izany ary fomba fanao tsara indrindra, mba hanafaingana ny tetezamita iarahantsika mankany amin'ny ho avy tsy misy aotra.
Ary amin'ny fanaovana izany dia arovy ny zavaboary ary tohano ny fiarahamonina.
Amin'ny ankapobeny dia ahafahantsika manao ireo fiovana ireo sady manome asa sy mandrisika ny fitomboana amin'ny alàlan'ny famporisihana ny fanavaozana sy ny fanomezana fahalalana, fitaovana ary rafitra famatsiam-bola.
Tsy andriko ny hiresaka momba ny Foibe miaraka amin'ity tontonana mendri-kaja ity, mandinika ny fomba hanampian'ny STGC ny indostrian'ny fizahan-tany amin'ny fifindrana mankany amin'ny fivoahana tsy misy aotra, ary hitondra hetsika hiarovana ny natiora sy hanohanana ireo vondrom-piarahamonina.